Somaliland: Dabaaldega 18-ka May - BBC Somali
Image caption Dabaaldega Somaliland
Noocyada ciidamada maraya waxaa ka mid ah milleteriga, boliiska, asluubta, ciidanka ilaalada xeebaha, kuwa waaxda socdaalka iyo ilaalada madaxtooyada oo salaan siinaya madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud siilaanyo . Ciidamada milateriga ayaa hub kala duwan la soo maray fagaaraha oo ay ka mid yihiin, gawaarida gaashaaman, tiknikada, madaafiicda goobta, iyo gantaalaha PM-ka.
Dabbaaldegan 18-ka may oo gobollada Somaliland oo dhan ka socda maanta ayaa sanadkan waxaa hal-ku-dheg looga dhigay "Aqoonsi ku qotoma nabad & Horumar ".
Madaxweyne Siilaanyo oo khudbad ka jeediyay fagaaraha ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay tixgeliyaan oo taageeraan ayuu yidhi go'aanka iyo aaya ka tashiga shacabka Somaliland. Wuxuu sheegay inay sii xoojinayaan wada shaqeynta dalalka deriska ah si mandiqada geeska afrika u noqoto nabadgelyo.
Nabadgelyada magaalooyinka ayaa aad loo adkeeyay beryahan danbe, gaar ahaan habeenkii oo lagu arkaayo jidadka Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ciidamo boliis ah.